Ny alika amin'io zozoro io dia toy ny kilalao kely mampihomehy, fa matetika ny miseho ivelany dia mamitaka. Ireo zavaboary tsara tarehy ireo dia mpihaza matihanina tsy natahotra, izay nentina manokana ho an'ny fihazana anaty lavaka. Dog West Highland White Terrier dia mahalasa saina sy filokana, afaka mandray fanapahan-kevitra mahaleo tena, ary avelao ny tsy hijerena ny halehibeny bitika.
Tantaran'ny West Highland White Terrier
Ny filazana voalohany momba ny "alika maitso", izay ampiasaina amin'ny fihazana anaty lavaka, dia tamin'ny taonjato faha-15. Ireo loko ireo dia manana loko sy vatana samihafa. Azo inoana fa ireo teratany voalohan'ny Tandrefana Highland White dia nipoitra vokatry ny fiampitana teratany Scotch, teratany maintany ary teratany Aberdine. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-19, i Colonel Donald Malcolm, izay nipetraka tany amin'ny faritra avaratr'i Scotland, tia nankafy ireo rambony, androngo, bitro, ary nendasina kely. Tena naniry tokoa izy fa manana mpanampy efa-tongotra efatra amin'io orinasa mahaliana io. Io lehilahy io dia nanana ny sakafony manokana ary nanomboka nanatsara ny nono. Tamin'ny fampiasana ny fotsy hoditra nataon'ny teratany tao an-tokantranon'ny Duke of Argai, dia nanomboka niparitaka ny kolonely, izay noraisina ho fahombiazana, taona vitsivitsy taty aoriana. Izy no tompon'andraikitra tompon'ity karazana ity ary nomeny anarana maoderina.
Sarin'ny alika maromaro West Highland White Terrier
Ny Westland High Terrier Standard White dia nankatoavin'ny taona 1905 taona. Mirefy 28 santimetatra eo ho eo ireo zavaboary mahafinaritra ireo, ary tsy mihoatra ny 7-10 kg ny lanjany. Ny fifindrana avy amin'ny saka amin'ny lohan-doha, mavesatra amin'ny volo matevina, dia saika tsy hita maso. Ny masony miorina sy mamboly azy; Ny oron'ny orona dia lehibe sy mainty. Ny lohan'izy ireo dia nanantona ny sofiny. Ny volon'ity biby ity dia tena fotsy, mahitsy ary marefo, miaraka amina loko matevina. Ny West Highland White Terrier dia manana toetra tony sy tsara fanahy. Miaraka amin'ny olona sy ny biby dia mandeha tsara izy ireo. Malaza ho azy ireo ny pugilism, na dia tsy azonao atao aza ny miantso an'io alika marary hoditra io. Manana karazana herim-po, ireo teratany West Highland dia miezaka mafy miaro ny tompony, amin'ny feo maneno mitady ny hampatahotra ny fahavalo. Fampiofanana, resy izy ireo, na dia misy zavaboary marefo aza, izay tsy maintsy hijaly. Ao amin'ny fianakaviana iray dia ny Tandrefana Andrefana dia lasa tian'ny besinimaro.
West Highland White Terrier - Karakarao
Ataovy tsara kokoa izy ireo any an-trano, na dia mila mandeha an-tongotra aza izy ireo na mandeha an-tongotra ivelan'ny tanàna. Aza adino fa noforonina ho mpihaza matihanina io zary io. Noho izany, miezaha hanome azy ireo ezaka ara-batana. Miaina 12-15 taona izy ireo. Ny volo mainty dia mila milanja sy manadio, izay tsy maintsy atao isaky ny indray mandeha isan-taona. Mba handroana izany dia ilaina raha ny tena ilàna azy raha mandeha amin'ny làlan-kanina mafy. Tsy ratsy ireo alika ireo, fa ny lisitr'ireo aretina izay voakasik'ity trondro ity matetika:
sakafo alème ;
ny marenina miafina;
meningoencephalitis an'ny alika fotsy;
West Highland White Terrier - sakafo
Ny puppies hatramin'ny telo volana dia mihinana intelo isan'andro. Avy eo dia adikao amin'ny famokarana 2 fotoana. Ny sakafon'ny sakafo ho azy dia raisina kely amin'ny valanorano. Amin'ny volana faha-6 dia afaka mahatratra ny fahamaotiana izy ireo. Noho izany, ny sakafo dia tokony hahitana azy ireo ho feno, ary ahitana ny zavatra ilaina rehetra ilaina amin'ny mineraly. Vao haingana ny fitombon'ny volana faha-10, ary azo alefa amin'ny alàlan'ny alika alika izany. Ny tavin-kena ao amin'ny vodiny tokony ho 16%. Aza misotro zava-pisotro na sakafo avy amin'ny latabatra ny biby - tena manimba azy ireo izany. Manaova karazana proteinina amin'ny amino asidra. Manaova fanamaivanana ary ahitana ny habetsan'ny fibre - izay hanampy amin'ny fanalana ny hafanana be loatra ary ilaina amin'ny fihazonana ny hoditra amin'ny toetra tsara.
Ireo tantsaha White Highland White dia saika tsy nanjavona nandritra ny fotoan-tsarotra nandritra ny ady sy ny fotoan-tsarotra taorian'ny ady, fa ireo mpihaza alika malaza sy hajaina dia nanambatra hery mba hamonjena azy. Matetika izy ireo no nampiasaina tamin'ny fanamboarana Scotch whisky, izay nanampy tamin'ny fampitomboana ny lazan'ny alika amin'ity zary ity eto amin'izao tontolo izao. Any Rosia ihany, mbola mahalana ireo zavaboary mahafinaritra ireo.
Parasites amin'ny alika
Ny aretina hoditra amin'ny saka
Pyroplasmosis amin'ny alika - soritr'aretina
Ny saka manan-tsaina indrindra amin'ny saka
Baitrile ho an'ny saka
Zavamaniry momba ny sifotra Siberiana - endri-panohanana sy fikarakarana
Nahoana ny alika no manana orona maina?
Ny saka nandositra - inona no tokony hatao?
Endometritis amin'ny alika - soritr'aretina sy fitsaboana
Ny akanjo ho an'ny ankizy amin'ny taona vaovao
Nosoratan'i Megan Markle teo amin'ny peratra misy ny Princess Diana ary nisintona ny fiara elektrônika mahafinaritra indrindra eran'izao tontolo izao
Sifotra ho an'ny alika
Pancake cake with crème crème - fomba tsotra sy mahasalama mahasalama mahavelona ho an'ny fianakaviana iray manontolo!
Fomba haingana mba hanovozan-javatra mahazendana avy amin'ny paompy
Vascular network amin'ny tongotra
Fennel ho an'ny zaza vao teraka
Ireo lamaody any Chicago
Nahoana ny ankizy no manana volo?
Ny sandry amin'ny sekoly
Voninkazo any ivelany